Global ကွန်ပျူတာသင်တန်း: July 2013
Since Windows 8 is so different, it will probably change the way you use your computer. This may takeawhile to get used to, but keep in mind that these changes are designed to make your computing experience easier and smoother.
For example, if you've used previous versions of Windows, you may be accustomed to launching programs by clicking on the Start button. In Windows 8, you'll use the Start screen instead. On the other hand, you'll still be able to use the Desktop view to organize your files and folders, and to open older programs.
Most people will have to use both the Start screen and the Desktop, depending on the task. You'll probably have to switch back and forth, which may be disorienting at first. However, if you mainly use your computer to browse the web, you may spend almost all of your time in the Start screen.
Switching from the Desktop to the Start screen
As you can see, Windows 8 isabig change from previous versions of Windows. It's not justanew version with new features — in many ways, it'sadifferent operating system. If you don't like the idea of changing the way you use your computer, you may prefer to stick with your current version, or upgrade to Windows 7. But if you like the new features that you've seen so far, then you may find that Windows 8 offers an easier and more enjoyable experience. In the next lesson, we'll cover some of the information you'll need to know before you upgrade, including different editions of Windows 8 and the hardware requirements.
Posted by Zayyar Ting at 10:19 PM 1 comment:
No Start button: The biggest change to the Desktop is that there is no Start button. In previous versions, the Start button wasavery common place to go to launch apps, access settings, or search the computer. Although these features are now accessible from the Start screen, many people may find it disorienting to use Windows without the Start button.
The Desktop no longer hasaStart button
Posted by Zayyar Ting at 9:57 PM2comments:
Posted by Zayyar Ting at 9:53 PM No comments:
There are many new features and changes in Windows 8, both small and large. These changes includearedesigned interface, online features, improved security, and more.
အရင်အသုံးပြုခဲ့သော Window ဗားရှင်းများနှင့် ယခု Window 8 ဟာ ဘာတွေ ကွဲပြားခြားမှုရှိနေပါသလဲ၊ အခုနားကအမေးကို ပြန်ဖြေပါတော့မယ် Window 8 မှာတော့ မွန်းမံမှုအသစ်များကို ပြုလုပ်ထားပါတယ်၊ အဲဒီပြောင်းလဲမှုမှာ အသေးနှင့် အကြီးစားပင် ဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီပြောင်းလဲမှုထဲမှာ စက်လည်ပတ်မှုတစ်ခုလုံးကို ပြန်လည်ရေးသားတည်ဆောက်ခြင်းဟာ အကြီးစားပြောင်းလဲမှုပင်၊ နောက်ပြီးတော့ အွင်လိုင်းနှင့်ဆက်စပ်သော ကဏ္ဍအသစ်များ၊ ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေအသစ်များ ပြုပြင်ခြင်းများနှင့် အခြားသော ဆောင်ရွက်ချက်များ ....၊
The first thing that you'll notice about Windows 8 is that it looks totally different from previous versions of Windows. The all-new interface includes features like the Start screen, live tiles, and hot corners.
ပထမဆုံးပြောင်းလဲမှုကတော့ Window 8 လို့အသိပေးခဲ့သလို ပါဘဲ အယင်Window များနှင့် အသွင်မတူသော ကွဲပြားခြားနားစွာ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်၊ အားလုံးသော Window 8 ရဲ့ စံနစ်မှာ Start Screen ဆိုတဲ့စ်နစ်၊ မိုဘိုင်ပုံစံသွင်ပြင်မှုမျိုးကိုခံစားမှုရစေမှာပါ၊ Live Tiles လိုစံနစ်များဖြစ်တဲ့ Window Map, Window Store , Window Finance, Window SkyDrive များဟာ Online ဖြင့်တိုက်ရိုက်ပြုလုပ်နိုင်မည့် ပရိုဂရမ်အစီအစဉ်များပင်ဖြစ်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ (Hot Corners) လိုဆိုတဲ့ စံနစ်ကိုအသုံးပြုပြီး ... program များကို ပြန်လည်ရွေးချယ်ဖွင့်ခြင်းများကို Screen ၏ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ထားရှိပေးထားပါတယ်၊ ၄င်းမှ မိမိအနေဖြင့်ရွေးဖွင့်မလား ၊ ပိတ်ချင်တာလား ၊ ညာကလစ်ခေါ်ပြီး .. Close လုပ်ရုံဖြင့် ... Window Task manager ခေါ်စရာမလိုဘဲ အမြန်ဆုံးအသုံးပြုနိုင်သောစံနစ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်၊
Start screen: The main screen that you'll use is called the Start screen, and it displays all of your apps as tiles. You can personalize your Start screen by changing the color scheme, choosingabackground image, and rearranging your tiles.
Start Screen: ဆိုတာဟာ အဓိကမြင်ကွင်းပါဘဲ အဲဒီစံနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မိမိကွန်ပျူတာတွင် ထည့်သွင်းထားသော ပရိုဂရမ်များအားလုံး မြင်တွေ့ပြီး အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်၊ သင့်အနေဖြင့် ၀င်းဒိုး အရောင်များပြောင်းလဲခြင်းများ၊ နောက်ခံဓါတ်ပုံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ၀င်းဒိုးများကို မိမိစိတ်ကြိုက်စီစဉ်ခြင်းများကို Start Screen သုံးခြင်းအားဖြင့် အကျိုးရရှိစေပါတယ်၊
Watch the video (3:25). Need help?
Windows 8 is the most recent operating system designed by Microsoft. It introducesalot of new changes, so if you're thinking of upgrading fromaprevious version of Windows, you should carefully look at these changes to decide whether upgrading isagood idea.
There have been many different versions of Windows over the years, including Windows7(released in 2009) Windows Vista (2006) and Windows XP (2001). While previous versions of Windows mainly ran on desktop and laptop computers, Windows 8 is also designed to run on tablets. Because of this, the interface has been simplified so that it will work with touchscreens.
Window 8 ကို စက်လည်ပတ်စံနစ်များ၏ လတ်တလောထုတ်ထုတ်အဖြစ် Microsoft ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Window 8 နဲ့ ပြောင်းလဲမှုအများအပြားကို မိတ်ဆက်ထားပါတယ်၊ ဒါကြောင့်မိုလို့ အယင်သုံးခဲ့တဲ့ Window XP, Window7နေရာ နောက်ထွက်ဗားရှင်းဖြစ်တဲ့ Window 8 ကို တိုးမြှင့်အသုံးပြုဖို့ စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်၊ သင့်အနေဖြင့် တိုးမြှင့်ပြောင်းလဲဖို့ ဆုံးဖြတ်မှုအပေါ်မှာ သေသေချာချာ ဂရုပြုသင့်ပေသည် တိုးမြှင့်ပြောင်းလဲမှုဟာ ဘယ်လိုပင်ဆိုဆို ကောင်းသော ပြောင်းလဲမှုပင်မဟုတ်ပါလား၊
Window သမိုင်းအရ စဉ်ဆက်မပြတ်သော မတူညီသော Window များကို နှစ်များစွာကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပါပြီ Window7ဆိုရင် (2009) ခုနှစ်မှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်၊ Window Vista ကို (2006) ခုနှစ်၊ ထိုအတူ Window XP ကိုတော့ (2001) ခုနှစ်မှာ အသီးသီးထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ အယင် ထုတ်လုပ်ခဲ့သော Window စံနစ်များကို Desktop နှင့် Laptop ကွန်ပျူတာများအတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်၊ ခု Window 8 ကိုတော့ Desktop နှင့် Laptop အပြင် Tablets များအတွက်ပင် အထူးရည်ရွယ်ပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Window 8 စံနစ်ဟာ အထူးသဖြင့် Touchscreens (မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် လက်ထိပြီး) ပေါ်တွင် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သောကြောင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်...။
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်သောစံနစ်များဟာ ကွန်ပျူတာ စက်ပစ္စည်းနှင့် ပရိုဂရမ်များအာလုံးကို စီမံခန့်ခွဲမှုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်၊ ၄င်းစံနစ်မရှိဘူးဆိုရင် ကွန်ပျူတာဟာ အသုံးမ၀င်တော့တဲ့အရာပါ။ ဒါကြောင့်မိုလို့ Window စက်လည်ပတ်သော စနံစ်ဟာ ဘယ်လို အလုပ်တွေလုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာ ဆက်ပြီးတော့ လေ့လာသွားရအောင်...။ ၀င်ရောက်လေ့လာပါ (စက်လည်ပတ်သော စနစ်အား နည်းလည်သဘောပေါက်ခြင်း)၊(စက်လည်ပတ်သော စနစ်များနှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း) ဒါတွေကို ကွန်ပျူတာအခြေခံ အသုံးပြုနည်းအနေဖြင့် ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Posted by Zayyar Ting at 9:41 PM No comments:
Eassy On the Role Of Computers in Everyday Life (ဆောင်းပါး)
ကွန်ပျူတာဆိုတာဟာ သိပ္ပံပညာက ပေးလိုက်တဲ့ ထူးခြားအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုပါဘဲ၊ ၄င်းဟာဆိုရင် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အချက်အလက်များအား သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပြန်လည်ရှာဖွေယူခြင်း များ ကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်၊ တွက်ချက်မှုအတွက်ဆိုရင် အလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်သော စက်ကြီးများကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်၊ Charles Babbage က 1812 ခုနှစ်တွင် ပထမဦးဆုံး ကွန်ပျူတာစက်ကို တီထွင်ခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီနောက်ပိုင်း George Boole က 1854 မှာ ထပ်မံ မွန်းမံခဲ့ပါတယ်၊ Howard နှင့် Aitten တို့က 1937 တဖန်ပြုပြင်ခဲ့ပါတယ်၊ Dr. John Nouchly နှင့် J. P. Eckert တို့က 1946ခုတွင် အသီးသီး အဆင့်ဆင့်မွန်းမံပြုပြင်ခဲ့ကြပါတယ်၊ အဲ့ဒီကွန်ပျူတာကို First Generation Equipment ဟု အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်၊ ယနေ့ခေတ်တွင် (၅)ဆက်မြောက်ကွန်ပျူတာကို လူတို့ဉာဏ်ရည်ကို ကွန်ပျူတာဖြင့် စီစဉ်တုပမှု ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်၊ မျိုးဆက်တစ်ခုတိုင်းတွင် ယခင်ကထက် ပိုပြီး သေးငယ်ခြင်း၊ ပေ့ါပါးခြင်း၊ ပိုပြီးမြန်ဆန်လာခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုမြင့်မားလာခြင်းတို့ ဖြစ်လာစေပါတယ်၊ ယခုခေတ်အ သုံးပြုနေသော မှတ်စုစာအုပ်အရွယ် ပုံစံအထိရောက်လာခဲ့ပြီး မဟုတ်ပါလား၊ ကွန်ပျူတာ စိုးမိုးမှုကာလကို 1970 ခုလိုပြောရမှာပါဘဲ၊ လူသားများရဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်မှု နေရာများနှင့် ယှဉ်တွဲပြီး ၀င်ရောက်လာခဲ့ပြီးမဟုတ်ပါလား၊
ကွန်ပျူတာ အတွက် ပရိုဂရမ်ရေးသားမှုဟာ အရေးပါအရာရောက်ပါတယ်။ ပရိုဂရမ်ရေးသားခြင်းများကို
software engineer များက ရေးသားကြပါတယ်၊ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များဟာ ပြီးပြည့်စုံသော ညွှန်ကြားချက်အ စီအစဉ်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးကြပါတယ်၊ ၄င်းအပြင် ပြဿနာများ ကို လက်ခံဖြေရှင်းပေးကြပါတယ်၊ ကွန်ပျူတာ Software များကို အောက်ပါဘာသာစကားများဖြင့် ရေးသားကြပါတယ် BASIC, COBOL, FOR TRAN, C, C++, JAVA နှင့် Visual Basic တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်၊
Speed, accuracy, reliability and integrity are some of the characteristics ofacomputer. It can execute overamillion instructions per second without committing and mistake. It can carry our calculations in justafew minutes that would require days if carried out manually. It helps us in solving many difficult problems of multiple calculations. Computer hasahuge memory. It can hold large amount of data. The software technology has seenaspurt of development and firms like Microsoft have established themselves as market leaders, pioneering the IT revolution world over.
ကွန်ပျူတာဟုဆိုလိုက်ရင် မြန်ဆန်မှု၊ တိကျမှန်ကန်မှု၊ သက်တောင့်သက်တာရှိမှု၊ ပြည်ပြည်စုံစုံရှိခြင်း၊ ဒါတွေနဲ့ ပြည့်ဝနေပါတယ်။ ၄င်းဟာ တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာ သန်းနှင့်ချီသော ညွှန်ကြားချက်များကို မှားယွင်းမှုမရှိ ၊ မပျက်မကွက်ပြီးမြောက်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါတယ်။ လူသားများအနေဖြင့် ရက်ပေါင်းများစွာ လုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ်များကို မိနစ်အနည်းငယ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်တွက်ချက်နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ကို ခက်ခဲ့ပြီး ရှုပ်ထွေးသော တွက်ချက်များကို ကူညီဖြေရှင်းပေးပါတယ် ။ ကွန်ပျူတာတွင် ကြီးမားကို မှတ်ညဏ်ပါရှိပါသည်။ ၄င်းသည် များပြားသော အချက်အလက်များကို ထိမ်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်၊ Microsoft ကုမ္ပဏီမှ Software နည်းပညာများကို စဉ်ဆက်မပြတ် အရှိန်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ပြီး ကျွမ်းကျင်ပြီး ခိုင်မာသော ဈေးကွက်စာမျက်တွင် ဦးဆောင်ရပ်တည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်၊ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံး နည်းပညာ ဖြင့် ကြီးကျယ်စွာ ပြောင်းလဲစေ့မယ့် ခြေလှမ်း ပါဘဲ၊
It has provided us with efficiency and accuracy in our work. Software acts as the medium through which communication and dissemination of information are carried out.
In less than 50 years, computers have influenced practically every field of activity. Many of the routine activities today are being performed by computers. Use of computers has reduced the paperwork. Now most of the work is done directly on the computers. The traffic in large cities is controlled by computers. Automation in banks and railway stations have provided relief to the public and staff alike. Ticketing and reservation have become more efficient and convenient. Various types of games like chess and cards can also be played on computers.
In medical diagnosis, computers are being used to locate and investigate accurately and precisely abnormalities and diseases. Business transactions and high volume of associated data are easily managed by using computers.
ဆေးဝါးကဏ္ဍတွင် ရောဂါများအမျိုးအမည်ကို ခွဲခြားစမ်းသပ်ခြင်း၊ ၄င်းကဏ္ဍများတွင်လည်း ကွန်ပျူတာဖြင့် ရောဂါဖြစ်သော နေရာ ၊ အကြောင်းအရာအတိကျကို ရှာဖွေခြင်း၊ ဖြစ်စဉ်အတိုင်း မဟုတ်သော ရောဂါ လိင်နှင့် ပါတ်သတ်သော ကူးစက်ရောဂါများ ရှာဖွေခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်၊ စီပွားရေးနှင့်ပါတ်သတ်သော အချက်အလက်များရေးသွင်းခြင်း၊ ကြီးမားသော စာရင်းဇယားများကို လွယ်ကူစွာဖြင့် ရှာဖွေနိုင်ခြင်းကို ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရရှိစေမှာပါ။
Computer is the backbone of information technology whose major application lies in internet. Internet has some very useful applications in our day to day life.
One can get railway and air tickets booked online. This saves one from the trouble of standing inaqueue for long hours. One can also apply forajob or admission inaschool oracollege by filling the application form online. This saves time and energy. One can also see results of any examination on the Internet. Tax returns can also be filed on the Internet. Income Tax form can be downloaded from the Income tax website.
ကွန်ပျူတာဟာ နည်းပညာနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ နောက်ခံကျောရိုးကြီး တစ်ခုအနေဖြင့်ရှိနေခဲ့ ပါတယ်၊ အဓိကတော့ အင်တာနက်ပါဘဲ ၊ အင်တာနက်မှာ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းမှု လိုအပ်ချက်များ အချို့သော အသုံးဝင်သည့် လျှောက်လွှာပုံစံ များကိုရယူနိုင်မှာပါ၊ တမျိုးအနေကတော့ ရထားလက်မှတ်ရယူခြင်းနှင့်Online မှ လေယာဉ်လက်မှတ်များ ကြိုတင်မှာယူခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒီစနစ်က နာရီများစွာ မတ်တပ်ရပ်စောင့်ဆိုင်းရခြင်းများကို သက်သာခွင့်ရစေမှာပါ၊ အလုပ်လျှောက်ခြင်း များကို လည်း ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ၊ ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း၊ ကောလိပ်အတွက် ဖောင်ဖြည့်ခြင်း များကို Online မှတဆင့် ပြုလုပ်ခြင်းများ၊ ဒါဟာ အချိန်နဲ့ စွမ်းအင်ကို ချွေတာခြင်းပါဘဲ၊ နောက်ပြီးတော့ စာမေးပွဲ ရလဒ်(အဆင့်မြင့်အတန်းဝင်ခွင့်)ကို အင်တာနက်မှ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်၊ အကောက်ခွန်ခ ရေးဖြည့်ခြင်းများ ကိုလည်း အင်တာနက်မှပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်၊ ၀င်ငွေခွန်နှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့ ၀င်ငွေခွန်ဆောင်ခြင်း ကိုအင်တာနက် စာမျက်နှာမှာ Download ရယူနိုင်ပါတယ်၊
The interconnection of computers worldwide, i.e., the internet, is revolutionizing the concept and the conduct of business. Visual and audio access to offices worldwide through the network has given rise to virtual offices. One can have easy access to information via internet. It is an ocean of knowledge for the students. It isahuge library. The Internet helps the student to study for the examinations. Students pursuing courses through distance education mode can study the subject online. The internet is the fastest and cheapest way to take admission inaforeign institution, collect geographical information of any region, chat with anybody in any corner of the world or search for life partner of one's choice.
ကမ္ဘာအနှံ့ကွန်ပျူတာများကြား အချင်းချိတ်ဆက်မှုများ။ ဥပမာ။ အင်တာနက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အပြည့်အ၀ပြောင်းလဲမူများ၊ ထင်မြင်ယူဆချက်များ အများသဘောတူညီစေခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ရုံးခန်းများမှ ချိတ်ဆက်ထားသော ကွန်ပျူတာ ကွန်ယက်များကို ဖြတ်သန်းပြီး ရုပ်လုံးပေါ်မူနှင့် အသံပိုင်းဆိုင်ရာများ ၀င်ရောက်အသုံး ပြု အကျိုးသက်ရောက်စေရန်။ အလွယ်တကူဖြင့် အင်တာနက်မှ သတင်းအချက်အလက်များကို ရယူနိုင်ပါတယ်၊ ၄င်းဟာ ကျောင်းသား/သူ များအတွက် အပြောကျယ်ဝန်း
သော ဗဟုသုတပင်လယ်ကြီးပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်၊ ၄င်းဟာ အလွန်ကြီးမားသော စာကြည့်တိုက်လည်း ဖြစ်ပါ တယ်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့် ကျောင်းသား/သူများအတွက် အင်တာနက် ဟာ အကူအညီဖြစ်စေပါတယ်၊ အဝေးရောက် ပညာသင်ကြားရေးစံနစ်မှာလည်း မိမိယူထားသည့် ဘာသာရပ်အလိုက် အင်တာနက်မှ
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဘ၀တသက်တာအတွက် ဘ၀လက်တွဲဖော် ရှာမယ်ဆိုရင်လည်း ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးနဲချိတ်ဆက်ပြီး စကားပြောခန်းများ( Chat) ဟာလည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ပါဘဲ။
The importance of the internet as an all-pervasive medium of the future has been well recognized in India. A very important indicator is the number of businessmen jumping on to internet related business. E-commerce is gaining popularity in India as it allows trade at low costs and offers enterprisesachance to enter the global market at the right time. E-commerce helps in various aspects of the business including identifying the customer, promoting sales and advertising, handling orders, taxes, shipping, payment processing, etc.
The state governments and the central government have put special emphasis on computer education in India. Computer application is also beig extended to legal arena. The Supreme Court of India has become the first court in the country to provide e-filing of cases.
အင်တာနက်ရဲ့အရေးပါအရာရောက်မူဟာဆိုရင် အနာဂါတ်အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ရန်အကောင်းဆုံး လမ်းကြောင်းဖြစ်ကြောင်းကို အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေဖြင့် သိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းအရေးကြီးဆုံးညွှန်းဆိုချက် ဆိုရာတွင် အင်တာနက်နှင့် ဆက်စပ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက အကွက်ကျော် သိမြင်ပြီး လုပ်ကိုင်ကြောင်းကို သိစေပါတယ်၊ E-commerce ဆိုတဲ့ Online မှာ ရောင်းခြင်း ၀ယ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ကလည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ရေးပန်းစား လူကြိုက်များသော နည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီစနစ်ဟာ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းမှာယူခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ခြင်းများကို ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ကမ္ဘာဈေးကွက်မှာ ကုန်သွယ်ခွင့်ကို အခွင့်အရေးရရှိစေပါတယ်၊ E-commerce စနစ်က ကူညီမူဖြင့် ရှုထောင့်အသီးသီးမှ စားသုံးသူများ ၏ရင်တွင်းဆန္ဒနှင့်ထပ်တူကျစေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပါအ၀င် ၊ ကုန်ပစ္စည်းများ အရောင်းမြှင့် တင်ခြင်း၊ ကြော်ငြာခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းမှာယူခြင်း၊ အကောက်ခွန်ဆောင်ခြင်း၊ နိုင်ငံကူးသင်္ဘောဆိပ်ကမ်းများ၊ အခြားသော ငွေပေးချေခြင်း ကိစ္စရပ်များတို့ဖြစ်ပါတယ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ဗဟိုအစိုးရအဖွဲ့များမှ ကွန်ပျူတာ ပညာရေးသင်ကြားရေးစနစ်ကို ဦးစားပေး ဖော်ဆောင်လျှက်ရှိပါတယ်၊ ကွန်ပျူတာ အသုံးချ Software များရေးသားခြင်းများကို တရားဝင် ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပပေးပြီး ကျွမ်းကျင်သော ပညာရှင်များမွေးထုတ်ပေးလျှက်ရှိပါတယ်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ကြီးကျယ်ခန်းနားသော ညီလာခံမှ တိုင်းပြည်၏ ပထမအဆင့် ညီလာခံမှ ကူညီမှုဖြင့် နည်းပညာလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးလျှက်ရှိနေပါတယ်။
Computerization has createdalot of jobs for DTP operators, Programmers, Hardware an Software professionals. It provides tremendous openings for new kinds of entrepreneurs.
The computer gives us many benefits. They can be used as typewriters. When equipped with telephone modems, with the help of computer we can chat across the world. Teleconferencing and video conferencing are also possible. The internet helps us to keep in touch with family and friends. One can get information about every subject known to man, ranging from government law and services. trade fairs, conferences, market information, education, society and politics.
ကွန်ပျူတာအသုံးချမှုလုပ်ငန်းများက စာစီစာရိုက်အလုပ်များစွာကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ Software ရေး သားသော အလုပ်များ၊ ကွန်ပျူတာ စက်ပစ္စည်းများနှင့် Software ပြုပြင်ခြင်း ၊ ထည့်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနိုင်ခြင်း ကျွမ်းကျင်အတတ်ပညာရှင်များကိုလည်း ပေါ်ပေါက်စေပါတယ်၊ ၄င်း၏ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် အံ့သြတုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းလောင်အောင်ပင် လူငယ်၊ လူရွယ်များအတွက် စီးပွားရေး များတွင် စွန့်စားလိုစိတ်များ ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်၊ ကွန်ပျူတာစနစ်မှ ကျွန်တော်တို့ကို အကျိုးရလဒ်များ စွာ ရရှိစေပါတယ်၊ ၄င်းတို့ကို သုံးပြီး စာစီစာရိုက်လုပ်ငန်းများအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ တယ်လီမော်ဒမ်များကို အသုံးပြုပြီး ကမ္ဘာတစ်ဘက်ခြမ်းမှာ ရှိနေသော သူများနှင့် တွေဆုံစကားပြောဆိုနိုင်ရန်လည်း အထောက်အ ကူပြုပါတယ်၊ ကွန်ပျူတာအသုံးချ အင်တာနက်မှ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ ရုပ်မြင် တွေ့ဆုံခြင်းများကလည်း ဖြစ်လာ ပါနိုင်ပါတယ်၊ အင်တာနက်စံနစ်က ဝေးကွာနေသော မိသားစုများအကြား တွေဆုံထိတွေ့ခွင့်ကိုလည်း ကူညီပေးပါတယ်၊ တစ်ခုအနေဖြင့်ကတော့ ထင်ပေါ်ကြော်ကြားနေသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ သတင်းအချက်အ လက်များကိုလည်း အလွယ်တကူဖြင့် အင်တာနက်ပေါ်မှ ရှာဖွေဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၏ ချမှတ်ထားသော ဥပဒေနှင့် ၀န်ဆောင်မူများကိုလည်း ရယူသိရှိနိုင်ပါတယ်၊ ကုန်သွယ်ခြင်းကိစ္စရပ်များ၊ အစည်းအဝေးများ ၊ ဈေးကွက်နှင့်ပတ်သတ်သော သတင်းများ၊ ပညာရေးကဏ္ဍများ၊ အခြားအဖွဲ့အစည်း များနှင့် နိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာများကိုလည်း သိရှိခွင့်ရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
The computer has proved asafriend and servant to science, technology and industry. The computer through Internet expands business opportunities. Computerization has been done in business, banking, electronic publishing, engineering, creative designing, fashion designing, etc. It is used in railways, airlines, defence service, research establishments. postal and communication departments, meteorology, medical science, stock-broking etc. In defence, they help radars, missile and rocket launching. They have opened new avenues of shopping and entertainment.
ကွန်ပျူတာစံနစ်များဟာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဲ့သို့ပင် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ များ၊ စက်မူဇုံများ ဆီသို့ အလုပ် ၀င်ရောက်နိုင်ရန် သက်သေခံနေပါတယ်။ ကွန်ပျူတာပညာရပ်များဟာ အင်တာနက်စနစ်မှတဆင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အခွင့်အလန်းများကို တိုးချဲ့လုပ်ကိုင် နိုင်ပါတယ်၊ ကွန်ပျူတာစနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်ကြသော ဘဏ်၊ လျှပ်စစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်သော စာပေပုံနှိပ်ခြင်း၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဒီဇိုင်းပိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အ၀တ်အစား ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း နှင့် အခြားလုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ်၊ ၄င်းအပြင် ရထားများ၊ လေကြောင်းလိုင်းများ၊ စစ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာများ၊ သုတေသနလုပ်ငန်းများ၊ စာတိုက်နှင့် တယ်လီဖုန်းလုပ်ငန်းများ၊ မိုးလေ၀သခန်းမှန်းခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ ဆေးသိပ္ပံနှင့် စတော့ရှယ်ယာ ရောင်း ၀ယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်၊ စစ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင် ရေဒါဖမ်းခြင်း၊ အဝေးပစ် အမြှောက်၊ ဒုံးကျည် ပစ်လွှတ်ခြင်းများကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အခြားအနေဖြင့် ဈေးဝယ် ၊ ဈေးရောင်းခြင်းများအပြင် ဂီတဆိုင်ရာ ပြုလုပ်ချက်များ ကိုလည်း လုပ်ကိုင်နိုင်ကြပါတယ်၊
Telecommunication and satellite imagery are computer based. Computerization can play an important role in rural areas in seed research, crop disease management and software development for rural industries.
The computer also has its negative side. The rise of cyber crime, the use of chat rooms for indecent discussion, certain websites, which deal in pornographic material have been noticed. But the advantages and importance outweigh the disadvantages. Through computerization, the world has becomeaglobal village today.
တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးစနစ် နှင့် ဂြိုလ်တုစနစ်များတွင် ကွန်ပျူတာကို အခြေခံပြီးလုပ်ဆောင်ကြ ပါတယ်၊ကွန်ပျူတာအသုံးပြုနိုင်မှုဟာအရေးပါအရာရောက်ကျေးလက်ဒေသများတွင်မျိုး စေ့ အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းခြင်း ရှိမရှိကို သုတေသနပြုစမ်းသပ်ခြင်းမျိုးကိုလည်း အထောက်အကူပြုပေးနိုင် ပါတယ်၊ အသီး အနှံများနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ပိုးဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခြင်းများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းပြုလုပ်ရန်နှင့် ကျေး လက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစီအစဉ်များကို လည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်၊ တခြားတဘက်မှာတော့ ကွန်ပျူတာကို မကောင်းကျိုးပြုတဲ့ဘက်အနေနှင့်လည်း ရှိနေပြန်ပါတယ်၊ ဥပမာ။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုမျိုး လည်း များစွာရှိနေပြန်ပါတယ်၊ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုမှုများမှာ ရိုးရိုးစကားပြောခန်းအပြင် လိင်ကိစ္စများ အတွက် အသုံးပြု ဆက်သွယ်ခြင်းမျိုးလည်း ရှိနေနိုင်ပါတယ်၊ ၄င်း လိင်အသားပေး အင်တာနက် စာမျက်နှာများလည်း သန်းနှင့်ချီပြီး ရှိနေပြန်ပါတယ်၊ ပြောရမယ်ဆို လိင်အသားပေး ၊ လိင်မှု လှုံဆော်သော၊ စာမျက်နှာများပင်ဖြစ်ပါတယ်၊ တဘက်က ကောင်းကျိုးအနေဖြင့်ရှိနေသလို အဆိုးအနေဖြင့်လည်း ရှိနေနိုင် ပါတယ်၊ ဒီလိုအားဖြင့် ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုမှုများက ကမ္ဘာကြီးဟာ ရွာတရွာသဖွယ် ဖြစ်တည်လို့နေ ခဲ့ပါတယ်။
Posted by Zayyar Ting at 10:51 PM 1 comment:
The keyboard isapiece of hardware that resemblesatypewriter keyboard. It is one of the primary ways we communicate with the computer and enter data. There are many different types of computer such as wired, wireless, ergonomic, multimedia, and more. Although there may be differences in the location of some keys or features, keyboards are very similar and allow you to accomplish basically the same tasks. The images below show you three different types of keyboards.
ကီးဘုတ်ဆိုတာဟာလည်း ကွန်ပျူတာ စက်ပစ္စည်း အမျိုးအစားတမျိုးဖြစ်ပါတယ်၊ ကီးဘုတ်အား လက်နှိပ်စက်ပုံစံကို နမူနာယူပြီး ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊ ကီးဘုတ်ဟာ ဆိုရင် အချက်အလက်များ၊ အမိန့်ပေးစေခိုင်းချက်များ ရိုက်သွင်းဖို့အဓိကလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ ကွန်ပျူတာအမျိုးအစားများစွာ ရှိအနက် ဖွဲ့စည်းပုံမှာလည်း ကွာခြားကြပါတယ်၊ ဥပမာ၊ ကြိုးဖြင့်ဆက်သွယ်သော စံနစ်၊ ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးစံနစ်၊ အခြားသော စနစ်များစွာလည်းရှိကြပါတယ်၊ ကီးဘုတ်တည်ဆောက်ပုံကွဲပြားခြားနည်းသည့် အတွက် ကီးတည်ဆောက်ပုံမတူညီကြပေ၊ ကီးဘုတ်များဟာ လုပ်ငန်းစဉ် လုပ်ဆောင်ချက်အရ တူညီကြပါတယ်၊ ကီးဘုတ်အမျိူးအစား သုံးမျိုးကို လေ့လာကြည့်ပါ.။
The main part ofacomputer keyboard has alpha-numeric (letter and number) keys similar toatypewriter. However, the keyboard also features keys that cause the computer to perform specific tasks.
ကွန်ပျူတာကီးဘုတ်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများမှာ Alpha-numeric အက္ခရာစာလုံးများနှင့် နံပါတ်စာလုံးများဖြစ်ကြပါတယ်၊ ဘာနဲ့တူလဲ လက်နှိပ်စက်နှင့်တူပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကွန်ပျူတာ ကီးဘုတ်မှာ အက္ခရာ စာလုံးကီးများမှာတော့ တိကျသော လုပ်ဆောင်ချက်များ သီးခြားလုပ်ဆောင်ရန် သတ်မှတ်ပေးထားလေ့ရှိပါတယ်၊
Escape Key ကီးဘုတ်မှာ ESC ဆိုပြီ အတိုဘဲ ဖော်ပြပေးထားမှဖြစ်ပါတယ်၊ ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရပ်တန့်စေရန် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်၊ ဥပမာ၊ ၊ Freezes Up ကွန်ပျူတာဟာ ရုပ်တရက် မောကစ်များ ရပ်သွားခြင်း၊ အပြင်မှချိတ်ဆက်ထားသော ပစ္စည်းများ ဟန်းသွားခြင်း၊ အဲဒီအခါမှာ ကီးဘုတ်မှ Escape Key ကိုနှိပ်ပြီး ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
Function Keys ကီးဘုတ်၏ အပေါ်ဆုံးအတန်းကို F1 မှ F12 ကီးများပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီ Function keys များကို Shortcut ဖြတ်လမ်းစနစ် ဖြင့် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော Program တွင် အမြန်ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ပါတယ်၊ ဥပမာ။ Microsoft Office အသုံးပြုနေစဉ် ကီးဘုတ်မှ F1 နှိပ်ပါ ကွန်ပျူတာ အကူညီကို ရယူနိုင်ပါတယ်၊
The Enter key carries out commands. For example, while on the Internet, you can type inawebsite address, calledaURL, and press Enter to go to the site.
The Backspace key erases the character to the left of
Print Screen, Scroll Lock and Pause/Break keys များ Function ကီးများ အဆုံး အပေါ်ဆုံးတန်းမှာ ရှိနေပါတယ်၊ Print Screen ကီးကတော့ ကွန်ပျူတာ မျက်နှာပြင်၊ (သို့) မိမိလိုအပ်သော မျက်နှာပြင်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ရန် အသုံးပြုပါတယ်၊ ၄င်းကီးကို နှိပ်ပြီး မိမိအသုံးပြုမည် စာစီစာရိုက် ပရိုဂရန်၊ သို့ ဓာတ်ပုံပြင်သော ပရိုက်ဂရမ်မှာ ကော်ပီး Paste လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်၊
Enter key ကတော့ အမိန်ပေးအချက်များကို ခိုင်းစေရန်အသုံးပြုပါတယ်၊ ဥပမာ။ ။ အင်တာနက်အသုံးပြုစဉ် ၊ အင်တာနက်လိပ်စာကို Address bar တွင် ရိုက်နှိပ်ပြီး၊ ကီးဘုတ်မှ Enter ကီးဖြင့် မိမိဖွင့်လိုသော အင်တာနက် စာမျက်နှာကို ၀င်ရောက်နိုင်ပါတယ်၊မှတ်ချက်၊ အင်တာနက်လိပ်စာကို URL လိုခေါ်ပါတယ်၊ (uniform resource locator)
Control (Ctrl), Alternate (Alt), and Shift keys ၄င်းကီးများကိုတော့ အခြားသော ကီးများဖြင့် တွဲသုံးနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်၊ ဥပမာ။ ။ ကီးဘုတ်မှ Ctrl + S နှိပ်ခြင်းဟာ၊ ဖိုင်သိမ်းရန် ပြုလုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။
Backspace key <- strong="">ကီးကတော့ ရိုက်ပြီးသားစာများကို Cursor (မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် စာရိုက်အမှတ်အသား) ၏ ဘယ်ဘက်အခြမ်းစာသားများ ဖျက်ရာတွင် အသုံးပြုပါတယ်။
Depending on the keyboard you are using, there are five to six keys above the arrows including:
The Insert key switches between the insert mode and overtype mode. The insert mode is the normal mode for word processing.
The Home key moves the cursor to the left or beginning of the current line.
End moves the cursor to the right end of the current line.
cursor control pad ဟာဆိုရင် ညာဘက်အခြမ်းမှနေပြီ ပုံမှန် ကီးတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားပါတယ်၊ အောက်ခြေမှာတော့ ဘယ်၊ညာ၊ အပေါ်၊ အောက် သွားလို့ရမယ့် မြှားတွေပါတဲ့ ကီးရှိနေပါတယ်၊ ဒီကီးတွေကတော့ မိမိလိုရာ ဦးတည်ရပ်ဆီသွားရန်ဖြစ်ပါတယ်၊
မိမိအသုံးပြု ကီးဘုတ်ပေါ်မှုတည်ပြီး ၄င်းArrow keys များရဲ့အပေါ်မှာ ကီး ငါမျိုးမှ၊ ခြောက်မျိုးထိရှိနိုင်ပါသေးတယ်၊
Delete key ၄င်းကီးဟာ ဆိုရင်၊ ကာဆာရဲ့ ညာဘက်ခြမ်းမှ စာများဖျက်ရန်သုံးပါတယ်၊ တခါလေမှာတော့ မိမိရွေးထားတဲ့၊ Icon များ၊ စာပိုဒ်များကို ရွေးပြီး ဖျက်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်၊
Insert key ကတော့ မိမိအနေဖြင့် ထပ်ဖန်တလဲလဲ သုံးရမည့်၊ စာကြောင်းများ၊ စာပိုဒ်များကို Copy ကူးထားပြီး၊ Paste ခေါ်ထည့်ရန် အတွက် စာစီစရိုက် Program များမှာ ပုံမှန်အနေဖြင့် အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်၊ Insert Mode နှင့် Overtype ကိုပြောင်းသုံးရန် ရွေးချယ်သည် ခလုပ်အဖြစ်လည်း သုံးနိုင်ပါသေးတယ်၊
Home ကီး အား မိမိလက်ရှိ ရိုက်နေသော စာကြောင်းအစသို့ ရောက်စေရန် အသုံးပြုပါတယ်။
End ကီးအား မိမိလက်ရှိရိုက်နေသော စာကြောင်း အဆုံးသို့ သွားရန် အသုံးပြုပါတယ်။
Page Up and Page down ကိုတော့ ကွန်ပျူတာ မြင်ကွင်း အပေါ်အောက်သွားရန် သုံးပါတယ်။
Number pad ကို ကွန်ပျူတာ အတွင်း စာရင်းဇယားများ အမြန်ရိုက်သွင်းရန် သီးခြား ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊ Character keys များ၏ အပေါ်တွင် လည်း နံပါတ်ကီးများကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်၊ Laptop ကွန်ပျူတာတွင် Number pad များ သီးသန့် မပါရှိပါ၊ သီးသန့် ၀ယ်သုံးရင်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။
Posted by Zayyar Ting at 10:11 PM No comments:
Computer with Two LCD Monitors Monitor
မော်နီတာအမျိုးအစားများဟာ ရုပ်ပုံဖော်သော ကဒ် (Video Card) ရှိမှ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ၄င်းကဒ်သည် ကွန်ပျူတာ သေတ္တာ ပုံးအတွင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ စာသားများနှင့် ပုံရိပ်များကို ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် အဓိက လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ မော်နီတာ အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ ၄င်းမှာ (CRT) နှင့် (LCD) တို့ဖြစ်ကြသည်။
CRT မော်နီတာများသည် အရွယ်အစားကြီးမားကြသည်။ ရုပ်မြင်သံကြားစက်နှင့်အလားသဏ္ဍာန်တူညီ သည်။ ၄င်းမော်နီတာအား စားပွဲပေါ်တွင် ထားရန်နေရာ အတော် ယူပြီး၊ အလေးချိန်လည်း စီးသည်။ ဒါပေမဲ့ ၄င်းမော်နီတာ အမျိုးအစားအတွက် ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာသည်။
LCD မော်နီတာ အမျိုးအစားသည် ပေါ့ပါးပြားချပ်သော ပုံစံဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်၊ လျှပ်စစ်မီးစားသုံးမှု သက်သာသည်၊ သို့သော် ဈေးပိုကြီးသည်။ ရှေးယခင်များက ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ် CRT မော်နီတာကို ပေါ့ပါးသော LCD မော်နီတာအဖြစ် ရှိနေကြမည်လား၊
Your monitor has an on/off button and control buttons that allow you to change your monitor's display. Control buttons are either visible or located behindasmall panel. Additionally, some monitors have built-in speakers.
သင်မော်နီတာ အမျိုးအစားအလိုက် မီးအဖွင့်အပိတ်ခလုပ်များ၊ အခြားပြင်ဆင်နိုင်သော ခလုပ်များကိုလည်း မော်နီတာပိုင်းဆိုင်ရာ များပြင်ဆင်ထိန်းညှိနိုင်ရန် မြင်နိုင်သော နေရာဖြစ်သည့် မော်နီတာ အရှေ့ အောက်ဖက်တွင် ထားရှိပေးထားသည်။ သို့မဟုတ် ဘေးဘက် ၊ အောက်ဘက်များတွင် ထားရှိပေးထားတပ်ပါတယ်၊ အချို့မော်နီတာများမှာ Speaker များတပါတည်း တပ်ဆင်ပေးထားတတ်ပါတယ်။
မီးကြိုးက အပြင်မီးခလုတ်ခုံနှင့်၊မီးအားအချိုးချခွဲဝေပေးသော (Power Supply Unit) ကို ကွန်ပျူတာ သေတ္တာတွင် တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်၊ အကယ် Power Cord မီးကြိုးနှင့် မတပ်ဆင်ထားပါက၊ ကွန်ပျူတာတွင် မီးခလုပ်ဖွင့်ရဲ့ရမည်မဟုတ်ပါ၊ ၄င်းစနစ်ဟာ မီးအားထိမ်းညှိဖို့အကောင်းဆုံး အကြံအညံဘဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ ၄င်းကို အပြင် မီးအားထိမ်းပေးတဲ့ UPS မှာတပ်ဆင်ပေးထားရပါတယ်၊ UPS က ကောင်းမွန်ချက် လိုနေတဲ့မီးအားကို အတိအကျထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်၊ Over Voltage မဖြစ်ရအောင်ပေါ့ ၊ မီးပျက်သွားရင်လည်း ယာယီလုပ်ငန်းခွင် ဖိုင်သိမ်း ကွန်ပျူတာ ပိတ်ခွင့်ရရန် မီးအားကို 10 မိနစ် သုံးခွင့်ကိုရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Zayyar Ting at 1:58 AM No comments:
Basic Parts ofaDesktop Computer (cont.)
Tower Case Desktop Case
ကွန်ပျူတာ သေတ္တာ ဟာဆိုရင် သတ္တုနှင့်ပလက်စတစ်များဖြင့်ပေါင်းစပ်ပြီး သေတ္တာပုံစံ တည်ဆောက် ထားပါတယ်၊ အဲဒီအထဲမှာတော့ အရေးကြီး ကွန်ပျူတာအစိတ်ပိုင်းများ တည်ရှိနေပါတယ်၊ အဲဒီမှာတော့ အထိုင်ဖြစ်တဲ့ Motherboard ၊ CPU ကွန်ပျူတာ ဦးဏှောက်၊ Power Supply မီးအားပေးတဲ့ စက်၊ ပြီးတော အခြားအရာတွေ ..။
ကွန်ပျူတာသေတ္တာပုံစံများဟာ မတူညီသလို အရွယ်အစားတွေဟာ အသီးသီးရှိနေပါတယ်၊ Desktop အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ သေတ္တာကိုတော့ စားပွဲမှာ ဘဲ အလျားလိုက် တင်ထားလေ့ရှိပါတယ်၊ သေတ္တာရဲ့အရှေ့ဘက်မှာတော့ ကွန်ပျူတာ အဖွင့်အပိတ်ခလုတ်နှင့် စီဒီ၊ ဒီဗီဒီ ဖွင့်စက် နှစ်မျိုးလောက် ရှိနေတာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်၊
အများစုလူတစ်ဦးတည်းသုံးကွန်ပျူတာ (Personal Computer (PC) ) ၀ယ်ယူတဲ့အခါ မှာတော့ PC သေတ္တာပုံစံ အထောင်ပုံစံ (Tower Case) ကို ယခင်အသုံးပြုခဲ့သော (Desktop Case) အစားထိုးထုတ်လုပ်လာကို တွေ့မြင်ရပါတယ် ၊ ဒါကလည်း ဟုတ်တာဘဲ Tower Case က Desktop Case ထက် တည်ဆောင်ပုံလွတ်လပ်တယ်၊ လေ၀င်လေထွက်ကောင်းမွန်တော့ အပူကို ထိန်းညှိပြီးဖြစ်တာပေါ့၊ ပြီးတော့ ပစ္စည်းဘာညာ ဖြုတ်လဲမယ်ဆိုလည်း ပိုအဆင်ပြေတယ်လေ၊ ..
အချိုသော ကွန်ပျူတာများက ALL IN ONE PC မော်နီတာနှင့် System Case ဟာ တစ်ဆက်တည်းပုံစံနဲ့ တည်ဆောက်ထားပါတယ်၊
Posted by Zayyar Ting at 1:11 AM No comments:
Posted by Zayyar Ting at 12:28 AM No comments:
စတိုးဆိုင်အတွင်းရှိ ကုန်ပစ္စည်းများကို ဘယ်လိုစီမံတွက်ချက်မှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်သလား ?
You may hear someone refer toacomputer asaworkstation oraserver, especially at work. You may wonder how these two items are different from desktop computers.
Workstations are similar to desktop computers, but are more powerful and are usually connected toanetwork. Servers are specialized computers that store and deliver, or “serve up,” information to other computers onanetwork.
There are many different types of servers such as file servers, database servers, and web servers. For example, employees atacompany might store all the business documents onafile server so that they can share files and access then from any computer on the network. When you use your browser to clickalink,aweb server delivers the page you requested on the Internet, the biggest network in the world.
သင်အနေဖြင့် ကွန်ပျူတာအမျိုးအစားများကို ထပ်ပြီးကြားနိုင်ပါသေးတယ်၊ Workstation (သို့ ) Server တွေပေါ့ အထူးသဖြင့် လုပ်ငန်းများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့် အံသြသွားနိုင်တာကတော့ ဒီကွန်ပျူတာအမျိုးအစားနှစ်မျိုးက ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ Desktop ကွန်ပျူတာအမျိုးအစားတွေနဲ့ ခြားနားနေကြသလား?
WorkStation ကွန်ပျူတာများဟာ Desktop ကွန်ပျူတာများနှင့် ပုံစံအတူတူပင်ဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ Desktop ကွန်ပျူတာများထက် ပိုပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် Network ချိပ်ဆက်ရန် အထိုင်ကွန်ပျူတာအဖြစ် အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်၊ Servers ကွန်ပျူတာများဟာ အထူးသဖြင့် အချက်အလက်များ သိုလှောင်ရာ၊ ဖြန့်ဝယ်ရန် ၀န်ဆောင်မှုပေးသော အထူးကွန်ပျူတာများဖြစ်ကြပါတယ်၊ အင်တာနက် ကုမ္ပဏီများမှာ Server ကွန်ပျူတာများကို အသုံးပြုကြပါတယ်။
Server ကွန်ပျူတာများမှာလည်း အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ် ။ File Servers အချက်အလက်များ သိမ်းဆည်းသော ကွန်ပျူတာ, Database Server စာရင်းဇယားများကို ထိမ်းချုပ်သော ကွန်ပျူတာ နှင့် Web Servers အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှုပေးသော ကွန်ပျူတာ တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
File Server ကို ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းများဖြစ်သော ၀န်ထမ်းရေးရာအချက်အလက်များ၊ စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို လုပ်ဆောင်ရန်အသုံးပြုသည်။ သို့အတွက်ကြောင့် ၄င်း File Server မှ ကွန်ပျူတာများသည် ဖိုင်များ မျှဝေခြင်း ၊ ရယူသုံးစွဲနိုင်ခြင်း ၄င်း network အတွင်းချိပ်ဆက်ထားခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Web Server ကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပါဘဲ Server မှတင်ထားသော Website များကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် စာမျက်နှာများတွင် Link သုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Web Server အနေနဲ့ကတော့ အင်တာပေါ်မှ တောင်းခံလာသော စာမျက်နှာများ ဖြန့်ဝေ ပေးရပါတယ်၊ Web Server ရဲ့ Network ကတော့ ကမ္ဘာမှာ အတွင်ကျယ်ဆုံး လုပ်ငန်းကြီးပေါ့၊ သောင်း၊သိန်း၊ သန်းချီနေတဲ့ စာမျာနှာကြီးတွေ နေ့စဉ်အသစ်ထွက်ပေါ်နေတာပေါ့၊ ခုဖတ်နေတဲ့ စာမျက်နှာကလည်း Web Server ထဲ့ စာမျက်နှာ တစ်ခုပေါ့။
နောက်ဆုံးပေါ် Server ကွန်ပျူတာ ကြီးများနှင့် အလုပ်လုပ်ပုံ
Posted by Zayyar Ting at 11:44 PM No comments:
Posted by Zayyar Ting at 10:46 PM No comments: